Musharax Xilka Madaxtinimada Somalia oo la kulmay Arday wax ka barata Turkiga – SBC
Musharax Xilka Madaxtinimada Somalia oo la kulmay Arday wax ka barata Turkiga
Posted by Webmaster on July 26, 2012 Comments
Waxaa dhawaanahan safar shaqo ku joogay dalka turkiga musharaxa madaxnimada dalka soomaaliya xaaji maxmed yaasiin ismaciil,safarkani shaqo ayaa waxaa uu kula kulmay madax ka tirsan dawlada turkiga iyo ardayda wax ka barata dalkaasi.
Isagoo ku soo noqday dalka Kenya ayuu waxaa uu saxaafada kaga warbixiyay xaaji maxmed yaasiin kulamadii uu la soo qaatay madaxdada dalka turkiga uu sheegay in ay ka wada hadleen arimo badan oo la xiriira soomaaliya iyo xiliga kala guurka ee dhawaan la galayo.
Kulankiisi ugu horeyay ayuu la qaatay wasiir ku xigeenka Awqaafta iyo arimaha diinta dalka turkiga iyo agaasimaha guud ee wasaaradasi waxaana inta badan uu musharax maxmed yaasiin kaga mahad celiyay taageerada buuxda ee Turkiga la garab taagan yahay walalahooda dalka soomaaliya.
Dhinaca dawalada turkigana waxaay sheegen in ay taageersan yihiin cid kasta oo shacabka soomaaliya ka saareeysa dhibaatada dagaalada iyo abaaraha ka jira dalka soomaaliya,iyagoona ku dhiiri-galiyay musharax maxmed yaasiin howsha adag ee doonaayo in uu soomaalliya ka qabto hadii uu ku guuleysto jagada madaxnimada dalka soomaaliya.
Geesta kalena Xaaji Maxamed yaasiin ayaa ku dheeraaday mahad-celin uu jeedinayo madaxda turkaga oo ku saabasan kaalmada bini-aadanimo ee siinayaan dadka soomaaliya xiligii ay jirtay abaarta daba dheeraatay ee ka dhacday dalka soomaaliya.
Arimaha kale ee labada dhinac ay ka wada hadleen waxaa ka mid ah sidii dawlada turkiga ay gacan uga geysan lahayd doorashada madaxnimada dalka soomaaliya ee la filayo in ay dhawaan ka dhacdo dalka soomaali,isagoona ka codsaday in Turkiga hubiyaan in doorashadaasi ku dhacdo hab caddaalada waafaqsan.
Xaaji Maxmed yaasiin oo hogaamiya xisbiga nabada caddalada iyo horumarinta ayaa waxaa uu sidoo kale kulan la qaatay Ku dhawaan 400 oo Arday soomaali ah kuwaasi oo wax ka barta dalkaasi turkiga,isagoona ku guubaabiyay sidii ay u noqon lahaayen mustaqbalka dhow kuwa hanta dalkooda iyo dadkooda.
Waxaana uu madaxda jaamacadaha iyo Macaahida ardaydaasi wax ay ka bartaan uu uga mahad-celiyay sida quruxda badan ee u dhisayaan iftiinkii barito ee dalka soomaaliya,waxaana uu ku aamanay doorkooda ku aadan arimaha dalka soomaaliya.
Xaaji Maxmed yaasiin oo ah musharax u taagan jagada madaxnimada dalka soomaaliya ayaa haatan waxaa uu ku gudda jiraan howsha xiriirka dibada,isagoona haatan safar ugu amba baxay dalka Jabuuti ee walalaha aan nahay.
Maaha markii ugu horeysay oo xaaji maxmed yaasiin isku soo sharaxo jagada madaxnimada dalka soomaaliya waxana sanadkii 2004 uu ka mid ahaa musharaxiintii liiska hore kaga jirtay jagada madaxnimada soomaaliya..